ယနေ့ သတင်းတိုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ယနေ့ သတင်းတိုများ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတံုး on Nov 22, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 18 comments
မန်းဂဇက်မှ မြန်းဂဇက်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ ရွာမှ မြို့သို့ ပြောင်းလဲအပြီး ယခင် သူကြီးဟု သမုတ်ခံရသူ ဦးခိုင် ဆိုသူမှာ မြို့ပိုင်မင်းကြီး ဟူသော အခေါ်အဝေါ်ကြောင့် မြှောက်ပေးမှန်းမသိ မြှောက်သွားပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းမွေးကြီး တကားကားနှင့် ဖင်လှန်၍ ချီးပါစဉ်အခိုက် ၎င်း၏ ဖင်မဲကြီးအား ချီးတွင်းထဲက မြွေမှ ကိုက်လိုက်သည် ဟူသတတ်။
ရွာ့နှာဗူးကြီး သို့မဟုတ် မြို့နှာဗူးကြီး အဖြစ် ကင်ပွန်းတပ်ခံထားရသူ ဦးကြောင်ကြီး ဆိုသူမှာ လိင်တူချစ်သူကြီး ဟု သတင်းကြီးလှသူ မိုက်ကယ်ဂျော်လကီအောင်ပု အား လမ်းခုလတ်၌ မတော်မတရားကြံရာမှ လဥထုသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း …။
ချော ချော မချော ချော ၎င်းကိုယ်ကို ဘလက်ချော ဟု မှည့်တွင်ထားသူ သည်လည်း အသည်းကွဲဒိုင်ယာရီ ဟူသော ပို့စ်အား တင်ပြီးသည့်နောက် ၎င်း၏ လေဒီဖြစ်သူမှ အောက်ပါအတိုင်း ကြိမ်းမောင်းကာ နားရွက်ဆွဲ ခေါ်ဆောင်သွားသည့်နောက် ပျောက်သော် မူသွားသတတ်။
လေဒီဘလက် စကားသံ = “အော် .. ရှင်က ပြောတော့ ဘုရား သွားတယ်။ သွားတယ်နဲ့ အခုတော့ အရက်ဆိုင်ရောက်ပြီး ကောင်မတွေအကြောင်း ပြောနေတယ်ပေါ့လေ။ လာဂဲ့”
အဘ ဘွဲ့ခံ ဦးဖော ဆိုသူမှာလည်း ၁၈ နှစ်အောက် အမည်တပ်၍ ဆေးအညွှန်း ပေးပြီးသကာလ ၎င်း၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ လစ်သည့်အခိုက် ဆေးထွက်ပြီးနောက် ငါကွ အဘ ဟူ၍ ကြုံးဝါးလိုက်ကာ ဆေးတစ်ဘူးလုံး ကုန်အောင် သောက်လိုက်ပြီးနောက်တွင်ကား ဩဇီတစ်လွှား လမ်းမများပေါ်တွင် လူရှင်းသွားသည်ဟု ဆိုသတတ်။
ကျန်သတင်းများ ဆက်ရန် ….
အပေါ်ကပါဒဲ့လူများ ခွေးလွှတ်ဂျဘာလို့ …
နောက်သတင်းတွေကျရင် အံစာတုံး အလှိမ့်ခံရခြင်း သတင်း ထည့်ပေးပါ..ပရော်ဖက်ဆာဂျီး…
ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ မယောင်ရာ ဆီလူး says:
ဟောဒီ ပရော်ဖက်ဆာဂျီးက ထည့်ပေးမှာပေါ့ကွယ် …
တညိုးမထင်နဲ့ .. အိုက်ဒီ ဒဒင်းကိုပြောတာ ..
ကျုပ်ညီလေး မြို့လယ်ခေါင် မြွေပေါက်ခံရတာလေးလဲ ရေးပါဂျာ..ခုခီခုခိ
မြွေပေါက်ခံရဒါ သူကြီး သို့မဟုတ် မြို့စားမင်းကြီးပါ
ကျန်တဲ့လူ မြွေပေါက်ခံရတယ်လို့ မကျားသေးဘာဘူး ညီငေးး
ဦး ဌက် ကြီး says:
သူမှာ နခဇယ ဖြစ်၏။
သူမနောက်သို့ မြန်မာမော်ဒယ်မရော အထီးတချို့ပါ စီးမျောကြ
ရွာ မှ မြို့ အဆင့် ပြောင်း လဲပြီး နောက် တွင် ရွာ၌ မရှိ
တတ်သော ကိစ္စများ ကို မြို့ ပီပီ တွေ့မြင်လာရလေသည်။
ဤ ကိစ္စ များကို စတင် လမ်းဖောက်သည်မှာအသူနည်း???
ရှေ့ မှ ဖောက်သူ ဖောက်၍ နောက် မှ လိုက်သူများကလည်း
လိုက်စ ပြုနေကြကုန်လေပြီ တကားးးး။
အမျိုးကောင်း သား သမီးများ အား တချက်တော့ ငဲ့စေ ချင်ပါ
ဦး ဌက် အတွက် တော့ ဟီးးးးးးး အဆင် ပြေ အိုစကေ
ဒီက ဦးငှက်ကြီးကို တစ်ခုလောက်တော့ မေးခွင့်ပြုပါ
ကျွန်ုပ်ရဲ့ သုတေသန ပြုချက်များအရ
ငှက်များမှာ ဟိုဒင်းရယ်လို့ ပါတာ မတွေ့ရဘူးး (ရှေ့ကဟာ .. ရှေ့ကဟာ)
ဒီက ဦးငှက်ကြီးမှာရော အဲ့ဒါ ပါမလာလောက်ဘူးလို့ ထင်မြင်နေမိပါတယ်
အဲ့ဒါ .. ဟုတ်မှန်ပါသလား ခည …
မြွေကိုက်ခံရဒါ ဒဂျီးဟုတ်ပါဘူးအေ ခြောက်မြှောင့် ဟိုဒင်းကိုကိုက်ခံရဒယ်ဆိုလား။ အခုတော့မိန်းမတင်တောင်းဖို့ ပို်က်ဆံရှာဖို့ရွာသွားပြီး ရေကန်ထဲရေငုတ်ပီးရွှေကျင် မလို့ဆိုလားအဲသတင်းလေးလဲရေးပေးပါအုံး။
အခုလို ဆိုလား .. ဆိုလား ..
မသေမချာ မရေရာတဲ့ သတင်းတွေကို တင်မပေးပါဘူး
အဲ ဆိုလားကို အတည်ပြုပြီးတင်ဘာလေ
ကျုပ်က မရောင်ရာဆီလူး ရဲ့ အရီး ဟေ့။
ဟို လိမ့်ချင်ရာလိမ့် နေတဲ့ လေးဒေါင့်တုန်း ဘယ်ရောက်နေလဲ။
အရီး သားဂို ခေါ်ဒလားးးငင်င်င်
ရွာလိုလို မြို့လိုလို ဆိုဒေါ့ …
အရီး ဆိုဒဲ့ နံမယ်လည်း ပြောင်းဒေါ့ …
သဒင်းတွေ ကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။
ဒါနဲ့အန်ဇာဒုံးဆိုတဲ့အကောင် ပလောက်ဖက်ဆာရူး ရူးသွားတဲ့သဒင်းရော
နာ့ ဒဒင်းလေးလည်း ရေးပေးဘာာာာာာာာာာ
နာ မင်လာဆောင်တော့မယ့် ဒဒင်းလေး…
ယုတိ္တယုတ္တာ မရှိတဲ့ဇဂါးတွေ မပြောစမ်းပါနဲ့….
ဇဂါးမစပ် ငါ့ဂျီမေးလ် အကောင့်အတ်ထားလိုက်အုံးးးးးးးးးး
သူများ ကိုများ ရေးရမယ် ဆို တတ်ပါ့။
ယိုင်နဲ့နဲ့ သတင်းရပ်ကွက်မှ ရထားသော ခိုင်လုံသော သတင်းများပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဟီးးးးးးးးးးးးး